ကဗျာ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 217
အောင်ဝေး၊ သြဂုတ် ၉ ၊ ၂၀၁၂ အာရပ်နွေဦးကို ငါတို့ထောက်ခံခဲ့တာ မှားပြီလား။ငါတို့နွေဦးကို သူတို့နားမလည်ပါလား။ လူ့ အခွင့်အရေးလား ဂျေဟတ်လား။ ငါ့ သဘောထား (ကဗျာဆရာအောင်ဝေး သဘောထား) ဘယ်ခြိမ်းခြောက်မှုမျိုးမဆို တစ်အချက် – ဆန့်ကျင်တယ် နှစ်အချက် – မကြောက်ဘူး။ အခု … (ပြည်တွင်းမှာ) မူဆလင်စစ်စစ်ကြီး အဘ ၀မ်းအိုဝမ်းကျော်ဝင်းမောင် မကျန်းမမာဖြစ်နေတယ်။ ငါ … ဒါကိုပဲ စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဗမာ့လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲဝင် သူရဲကောင်းကြီး အဲဒီ မူဆလင်ကြီး ကျန်းမာပြီး အသက်ရှည်ပါစေ ငါ ဆုတောင်းတယ်။ မပြီးဆုံးသေးတဲ့ ဗမာ့ဒီမိုကရေစီခရီး ဆုံးခန်းတိုင် အဘ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ငါ ဆုတောင်းတယ်။ အောင်ဝေးဟာ ဗမာနိုင်ငံသား မြန်မာတိုင်းရင်းသား အားလုံးက နားလည်နိုင်ကြပါစေသား။...
Kamar Pale – 8888
အားလုံးရဲ့ ရင်ထဲမှာ သူရှိတယ် … ။ တပွင့်ချင်း ဖွင့် ဖတ်မလား တလွှာချင်းစီ ရင်ခုန်ကြည့်မလား …။ အသံမှာ ဒေါသစွက်ရင် အဲဒီခေတ်ရဲ့ အပြစ်မဲ့ မျက်ရည်ဘက်က စာနာပါ၊ ရနံ့မှာ သွေးစိမ်းရှင်ညှီ သင်းနေခဲ့ရင် ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ မတရားမှုတွေကို သင့်နှလုံးသားက လက်မခံလိုက်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ No tags for this post.
ဆောင်းလူ၊ သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၂ ၁၀ စုနှစ် တခုကြာကင်းကွာခဲ့တာမှာ စိတ်ရောင်စုံ တိမ်အသေတွေနဲ့ ကျီးတွေ “အာ” တဲ့ မြို့ ….။လူလားခေါက်ပြန် ကားအထပ်ထပ် လမ်းပျက်ထက်မှာ ယာဉ်ကြပ်တဲ့မြို့ ….။ လစာ သုံးသောင်း ဆန်တအိတ်နဲ့ ဂျော်နီလမ်းလျှောက် ကိုင်သောက်နေတဲ့ မြို့ ….။ တမှတ်တိုင် နှစ်ရာ နှစ်မှတ်တိုင် နှစ်ရာ ကိုယ့်အသက်ကို ဖက်နဲ့ထုပ် လိုရာေ၇ာက်ဖို့ ဆုတောင်းနေရတဲ့မြို့ …။ ဖေ့ဘွတ်ခ် တွစ်တာ ပီဖင်းလ်ကိုး ဂျီးတော့နဲ့ နက်ဂိမ်းတွေကြား ကမ္ဘာတခုကို ရင်ဘောင်တန်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ မြို့….။ နီယွန်မီး ဆိုင်းဘုတ်ကြီးတွေနဲ့ သိန်းချီတန်တိုက်တွေကြား ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပထဲမှာ မျက်နှာငယ်လှတဲ့မြို့ …။ မိုးတဖြိုင်ဖြိုင်ကျတဲ့နေ့ဆို ခိုပြာတွေ အုပ်စုဖွဲ့ ကျီးတွေကြားမှာ တလောကလုံး...
ကျော်မိုး ( စကားဝါမြေ )၊ သြဂုတ် ၈၊ ၂၀၁၂ သားရေ သားလိုအရွယ် အဖေ့ငယ်ဘဝ ချပြရရင် မယ်မယ်ရရ ဘာမှမရှိပါဘူးကွာ ပတ်ဝန်းကျင်က အညတရ မိဘတွေက ဆင်းရဲလှ အဖေ့ကိုယ်၌က ထုံအအ အဲဒီလိုနဲ့ လူ့ဘဝကို ပုပ္ပါးတောင်ခြေ ကျောက်ပန်းတောင်းဆိုတဲ့ နယ်မြို့လေးက စခဲ့တယ်။ခေတ်စနစ်ဆိုးကြီးထဲ လူဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ကလေးတစ်ယောက် ဘဝမှာ အတွေးတွေက ဒွိဟ ရည်မှန်းချက်က မှုံပြပြ ပိုင်ဆိုင်တာက သုည နေရတာက မပြည့်မစုံဘဝနဲ့ပေါ့။ ” စားဝတ်နေ “အရေးသုံးပါးနဲ့ လုံးထွေးပြေးလွှား ရုန်းကန်နေတဲ့ အဖေ့မိဘ သားကို ကျောင်းထားတာ ဆရာဝန်ဖြစ်ဖို့ အင်ဂျင်နီယာဖြစ်ဖို့ အဲလို ရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမထား အစဉ်အလာနဲ့ ဝတ္တရား မပျက်ပြားရအောင်ဆိုပြီး ထားခဲ့တာပါ။ မှုံတေတေ အဖေ့ကျောင်းသားဘဝ...
(၈၈) လက်သီးဆုပ်များရဲ့ ရာဇဝင်မြောက် အမိန့်ကျော်ဟုန်း၊ သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၂ ပြောကြရမယ်ဆိုရင် ဒီလက်သီးဆုပ်တွေက ပုဆိုးခြုံ ထမီခြုံထဲက ပြခဲ့တာမဟုတ်ဘူး၊ အာဏာရှင်သေနတ်ပြောင်းထွက်တဲ့ ကျည်ကြား ပြခဲ့တဲ့ ရဲရင့် လက်သီးဆုပ်တွေ။ ရှစ်လေးလုံးဆိုတဲ့ ၈-ရက်၊ ၈-လ၊ ၈၈ ဟာ နုနယ်တဲ့ လက်သီးဆုပ်တွေ လေထဲမြှောက်ရင်း ဟစ်ကြွေးခဲ့တဲ့ ကျောင်းသား၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အသံဟုန် ဧရာဝတီမြစ်ဝှမ်းကနေ မေခ-မေလိခ အထက်ဆန် တနှင်္တရိုး ဖြိုးမောက်သွားခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မြစ်မှ ပင်လယ်ဆီ လှိုင်းထန် ပင်လယ်မှ သမုဒ္ဒရာများစီး မုန်တိုင်းဖြစ် တံတိုင်းခတ်ထားမရ ကြားစေခဲ့တဲ့ (ဒို့ အရေး) ဒီမိုကရေစီ ရရှိရေး (ဒို့ အရေး-ဒို့ အရေး)။ ရှေ့ နောက်တောင်မြောက် အရပ်ရပ်ကမ္ဘာက...
တယောပြားလေး ပေါ်မှာ အားလုံးရှိတယ် ခင်အောင်အေး၊ သြဂုတ် ၇၊ ၂၀၁၂ ကမ္ဘာလောကထဲ အူဝဲလို့ စတင်လိုက်တဲ့ အသံတွေ သိန်းသန်း ကုဋေမက ရှိတယ် ကလေးဘ၀ကတည်းက ဇာတိပြတဲ့ အနာဂတ် အာဇာနည်တွေရှိတယ် တယောပြားလေး ပေါ်မှာ အားလုံးရှိတယ် တပွင့်ချင်းပွင့်တဲ့ သာမင်ညောင်ည ပန်းက အစ တခဲနက် ပန်းခင်းကြီးတွေအားလုံးရဲ့ ပွင့်အာသံတွေ ရှိတယ် အသက်နဲ့ချိန်စက်ပြီး ယုံကြည်ချက်လည်ဖြတ်ဓါးစက်ပေါ်တက်ကာ အမှန်တရားနဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ လူ့အခွင့်အရေးတွေအကြောင်း မနားတမ်း အော်ပြောတဲ့သူတွေရှိတယ် တယောပြားလေး ပေါ်မှာ အားလုံးရှိတယ် ငေးကြောင်နေတဲ့ မင်သက်မိနေသူတွေပေမယ့် သတိဝင်လာတဲ့အခါ စကားလုံး စာသားတွေနဲ့ ခေတ်ကို ကိုင်လှုပ်ပစ်လိုက်တာတွေရှိတယ် ကော်ဖီတစ်ခွက်ရဲ့ နှုတ်ခမ်းအစပ်ပေါ်မှာ လွန့်လူနေတဲ့ အငွေ့တွေရှိတယ် ၀ါးရွက်ကလေး တရွက်ပေါ် နေခြည်ခ, တဲ့အခါ...
သင်ဘာပြောမလဲ သြဂတ်စ် သက်ခိုင်၊ သြဂုတ် ၆၊ ၂၀၁၂ ဒီမယ်သြဂတ်စ်ရဲ့ သေချာတယ်ကွဲ့ ဇနပုဒ်က မိခင်ထောင်သောင်း သားအလောင်းရှာခဲ့တဲ့ဇတ်လမ်း သင့်မှတ်တမ်းထဲမှာရှိတယ်။ နီစွေးဖွေးကြွ ခွပ်ဒေါင်းဘဝနဲ့ မတရားမှုကိုပြိုင်တု ငါတို့ အနိုင်လုခဲ့တာလဲသိမယ်။ စာသင်သံ တိုးတိတ် ထောင်နံရံမှာ တိုးကြိတ် ဒီလို လူငယ်တွေ ပိုးအဆိပ်ခံရတာလည်း ရှိတယ်။ မိကွဲဖကွဲ ဒီဘဝထဲ သင်ကဆက်လျှောက် အခုဆို (၂၄)နှစ်ရောက်ခဲ့ပြီ။ လွမ်းလိုက်တာ အခုချိန်ထိ လူတွေက တမ်းမှန်း မတူသူတွေက ဗြဲလရမ်း အော် … ပူပင်စရာတွေက သန်းဂဏန်းနဲ့ပါလားကွယ်။ ဒီမယ်သြဂတ်စ်ရဲ့ မိုးစက်ကြား ကျည်ဆံရော သွေးအစက်စက်တွေ ပေတရာမှာမျော အဲဒါ သင်ဘာပြောမလဲ။ (photo – 88 Generation Students – facebook...
Okay Linn – ဆုတောင်း
အိုကေလင်း – ကဗျာ၊ သြဂုတ် ၅၊ ၂၀၁၂ (ကမ္ဘာတခြမ်းစီ ဆုတောင်း) No tags for this post.
Ko Oo + Ma Thandar Design သား မင်းကို မင်းအဖေက မိုးမခမင်း လို့ အမည်ပေးခဲ့တယ် …။ သူလည်း သူ့ အဖေ အမေ ကိုယ်စား မိုးမခပင်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတာ …။ သား မင်း စကား စ ပြောတော့ ‘အရေးကြီးပြီ ညီနောင် အပေါင်းတို့ သွေးစည်းကာ ညီစေညီကြစို့’ တဲ့ …။ ဘဝ အပူတွေလည်းငြိမ်းခဲ့ ကိုယ့် ရွေးချယ်ရာလမ်းကိုလည်း ကိုယ်အမှန်အတိုင်းမြင်ခဲ့ ဆီ ဆန် ဆား ငြုပ် … ချို့တဲ့ ဘဝ ပြဿနာ သားရဲ့ ပြုံးစစ မျက်နှာမှာ လက်ဝါးကလေး နဖူးမှာကပ် အလေးပြုနေတဲ့ စတိုင်က …။ ညီမကလေး...
Page 217 of 229«1...215216217218219...229»
လမ်းဘေးသတင်းထောက် – ဘယ်တော့ ပြောင်းလဲမှာလဲ https://t.co/aONXVCTZKs https://t.co/fbTbBW2Kx5 about 18 minutes ago ReplyRetweetFavorite